Indy : Tsy misy toeram-pivalanana · Global Voices teny Malagasy
Indy : Tsy misy toeram-pivalanana
Voadika ny 04 Novambra 2007 10:23 GMT
Ny blaogy India Daily dia mitatitra fa tafakatra tahan'isa 80% -n'ny mponina any Indy no tsy mampiasa toeram-pivalanana manara-penitra ara-pahadiovana. Mahakivy ihany izany indrindra raha heverina fa hotanterahina any Indy amin'ity herinandro ity ny Fivoriambe Iraisam-Pirenena faha-7 mikasika ireo Toeram-Pivalanana na « 7th World Toilet Summit » [karakarain'ny « World Toilet Organization »] :
« India was one of the first cultures to have sitting toilets in the society […] At present, 2.6 billion people in the world have no access to toilets and 1.3 billion live in India and China […] This has become a habit for most of the Indians. They hesitate using the public urinal and do prefer peeing in open because of the worst condition of public toilets at most of the places. »
« Ny fiaraha-monina Indiana dia isan'ireo voalohany izay nampiasa toeram-pivalanana azo ipetrahana […] Manerana izao tontolo izao dia miisa 2,6 lavitrisa [milliards] ankehitriny ireo olona tsy mampiasa toeram-pivalanana ka ny 1,3 lavitrisa amin'izy ireo dia monina any Indy sy Shina avokoa […] Zary lasa fahazarana hoan'ny ankamaroan'ny Indiana. Aleon-dry zareo mivalan-drano ety ivelany toy izay any anatin'ireny trano fivalanana misokatra hoan'ny vahoaka ireny satria ny ankamaroan'ireny dia tena maloto sy ratsy kojakoja tokoa. »
Faly ireo mpankafy Rooh Afza any India rehefa niverina hita teny amin'ny toeram-pivarotana nandritra ny fotoanan'ny Ramadany ity zava-pisotro ity
09 Mey 2019Azia Atsimo
Raha ireo sainam-pirenena hitako eo amin’ny vohikala dia tsy mambran’ity fikambanana WTO ity i Madagasikara, anefa angamba iaraha-mahalala ka tsy ilaina ho voaboasana eto fa mila ezaka goavana tokoa io lafiny iray io any amin’ny tanindrazantsika.
04 Novambra 2007, 10:29
Diso marina loatra izany. Na dia ao andrenivohitra aza dia mbola vitsy ny manana “fosse septique”. Ny “assainissement collectif séparatif” angamba dia asa fotsiny fa tena tara be isika.
04 Novambra 2007, 20:28
Hiresaka koa -> toetra RAJA
Vakio amin'ny teny বাংলা, हिन्दी, فارسی, 繁體中文, 简体中文, English